LIYANGQONGQOZA IZEMBE: uMpengesi uyapheka uyathulula ngaphakathi - Impempe
LIYANGQONGQOZA IZEMBE: uMpengesi uyapheka uyathulula ngaphakathi
May 20, 2021 Impempe.com
USiviwe “Chippa” Mpengesi ongusihlalo weChippa United akawuyekile umdlalo wakhe wokuxosha nokuqasha abaqeqeshi, yize sekusele imidlalo emibili kuphela ukuthi kusongwe isizini yeDStv Premiership.
NgoLwesithathu uMpengesi ukhombe indlela umqeqeshi obesanda kufika, uVladislav Heric, ngemuva kokuthi iqembu lishaywe yiBloemfontein Celtic ngo 2-1. Bekungakapheli nemidlalo emingaki uHeric efikile kulandela ukuxoshwa kukaDaniel Malesela.
Ukukhonjwa indlela kukaHeric uqale wakuphika uMpengesi kodwa ngoLwesine ubesekhuluma into ehlukile ngemuva kokumemezela ukubuya kukaLehlohonolo Seema owayexoshwe ngesikhathi kuqashwa uMalesela.
USeema uzobamba kule midlalo emibili esele futhi maningi amathuba okuthi ngesizini ezayo abe engasabonwa kwiChilli Boys. Lo mqeqeshi owake wayibamba kwi-Orlando Pirates njengomdlali, ujoyina iqoqo labaqeqeshi eselixoshwe labuye labuya kwiChippa kaMpengesi.
Kulaba baqeqeshi sibala uRoger Sikhakhane, ongasekho, Malesela, Heric nayeke uSeema, okungakapheli nezinyanga ezingakhi ekhonjwe indlela kwiChilli Boys. Ekhuluma kuMhlobo Wenene FM, uMpengesi ukuqinisekisile ukuhamba kukaHeric nokubuya kukaSeema.
“Ekuqaleni saphakamisa kumqeqeshi (uHeric) ukuthi sifuna ukuletha umuntu ozomsiza alungiselele imidlalo yokuhlunga ngoba silungiselela lokho kodwa wala waphetha. Sicabange ukuthi kungcono sihlukane,” kusho uMpengesi.
“Sibuke amava omqeqeshi nomlando wakhe sabona ukuthi washonisa ehlathini amaqembu amabili kwiNFD, futhi uke waqeqesha iCape Town Spurs evika izembe kuyimanje.
“Sicabange ukuthi ngeke akwazi ukusebenza yedwa. Kukhona (uSeema) ophakamise isandla wathi ufuna ukuzosiza iqembu lingayi ehlathini, futhi ngesikhathi sibukisisa sibone ukuthi uyindoda ekahle kakhulu ukuthi isitakule.
“Lokhu kungenxa yokuthi uyaliqonda iqembu futhi abanye babadlali ayefike nabo basekhona,” kuchaza uMpengesi.
Angakuchaza nje uMpengesi konke kodwa okusalayo ukuthi ngo-2018 lo Heric asemgxeka kangaka uke wayiqeqesha iChippa United. Futhi nguye owayinusa isuka kwiGladAfrica Championship iza kulesi sigaba.
Previous Previous post: Inqaba ukwenziwa iminqolo ishayelwe ekhaya iSharks
Next Next post: SHWIII!: Asengene amanzi endlini kwiPSL elinda kube sekugcineni ngamacala